Ya mere, site ugbu a, ị nwere ike chọpụta na ọ bụghị onye ọ bụla bụ onye ofufe n'ime egwuregwu ndị a, ọma ọnwụ ha! Nsogbu bụ ọtụtụ 'mgbochi gamers’ enwe a mma ochie whinge ma e nwere ụzọ ndị i nwere ike na-gị agụụ maka ndụ ma na-enyere aka obi ụtọ nri na wingers obi ụtọ mechie ọnụ!
Chọta gị allies, zipụ a tie mkpu si ọnọdụ akpọku niile ibe gamers, onye ọ bụla na-arụ ọ bụla egwuregwu na Facebook maara uru nke a oké ibe bara uru enyi. Nke a na-adịghị nnọọ nanị Pet Nnapụta kwa, ọ bụla hardcore ọrụ ugbo ma ọ swiiti crushers ga-enwe obi ụtọ ọkọ azụ gị na nloghachi nke nta na nloghachi!
Ozugbo i achọpụtabeghị onye gị ezigbo enyi na-tinye ha niile na-a smart ndepụta. Mgbe ahụ oge ọ bụla ị biputere ihe ọ bụla Pet Nnapụta dị nnọọ ijide n'aka na-họrọ ndepụta a ka gị na-ege ntị. Ị nwere ike n'ozuzu họrọ n'etiti ọha na eze, enyi, ezigbo ndị enyi ọ bụla smart anatara pụrụ ịbụ na ị mere. Get maara na nzuzo gị ntọala, ọ nwere ike na-adịghị eme ihe ọ bụla nsogbu ka ume gị ntọala bụla ugbu a na mgbe ahụ na agbanyeghị!
Ịgba na-ege ntị nke ngwa nwere ike biputere na n'ihi gị, anyị na na na niile hụrụ na ihe na ngwa na-arahụ ọhịa, ezipụ ndị na-arịọ ka mezue random enyi hapụrụ ziri ezi na center. Gaanụ n'ime ntọala wee banye ngwa ntọala ma họrọ 'nanị m’ ị ga-ahụ otú ọtụtụ ihe ndị a Post na n'ihi gị, sịkwa ihe mere ụfọdụ ndị mmadụ na-a obere cranky! ha n'ezie Na mkpa ịmara everytime ị mepụtara a firecracker ma ọ bụ gafere a enyi na Leaderboard…n'eziokwu m egwuregwu (a otutu) na na ngwa ọdịnala na-ọbụna Egbochiri m ozi ọma ndepụta.
Ekwu okwu nke igbochi ngwa o nwere ike ịkwụ ụgwọ na-etinye otu obere ọnọdụ ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ị na-copping a obere ọjọọ nzaghachi banyere otú ị biputere, ihe ọ bụla kwa ịrịba ama dị nnọọ echetara ndị mmadụ na ha nwere ike see obere 'X’ na n'elu nri akuku nke ọ bụla post iwu megide ya na ha ozi ọma ndepụta kpamkpam. The scariest ihe banyere facebook bụ n'ezie ọnụ ọgụgụ nke ndị na-enweghị echiche ihe ha na-eme!
Ọ bụrụ na ị na-rapaara na a akwa na ị chọrọ inyere ndị enyi gị na-agafe na ndị enyi gị dị nnọọ na-agaghị na-arịọsi arịrịọ maka enyemaka (ị mara mgbe ya na dị ka a dum hour na ị naanị abụọ nke atọ gafee) ị nwere ike mgbe niile Ikwupu si facebook na mezue ihe aga-eme na aka. a doro anya na-arụ ọrụ mgbe ị na-na ngwaọrụ dị ka a na ekwentị.
Ndien ke akpatre n'ezie a facebook n'ọnụ ma cheta na i nwere ike 5 na ndụ na onye ọ bụla na ngwaọrụ i egwuregwu n'elu na, otú Emmanuel, iphone, Laptọọpụ, desktọọpụ (nne na nna / di ma ọ bụ childs ekwentị!)
Filed Under: Facebook Tagged: Facebook, enyi, Lives